We Fight We Win. -- " More than Media ": စာအုပ်အမြည်း
Fight for Burmese Farmers
ဦးဝင်တင် ( Democracy Founding Father) အဖြစ် ဂုဏ်ပြုကြ။
မူလမဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင် ကျနော်အား ဆံချ ပေးနေပုံဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉ ၈၁ခန့် )
ကျနော် ပဉ္စဇင်း ခံနေပုံဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၁၈ နစ်မှာပဉ္စဇင်းခံလို့ မရဘူး ၁၉နစ်ပြည့် မှခံလို့ ရတယ်လို့ သိရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲတော့မသိပါ။ မူလမဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ပျံလွန်တော်မူတော့မယ်လို့ ထိုစဉ်က သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးကိုရဟန်းဌာလို့ သမုဒ်ကြတယ်။ အမေတို့ က ဆရာတော်ကြီး ရှိတုံး သင်္ကန်းစည်းပေးဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်အမေ၀မ်းထဲမှာ ရှိစဉ် ကာလ ကိုပါထည့် တွက် ပြီး ၁၉ နစ်ပြည့် ဆိုပြီး ပဉ္စဇင်းခံပေးပါတယ်။ ကျနော်ကို ဦး ဇင်းတပါးက ဆံချနေတာပါ။ ဒီအချိန်မှာ ဆရာတော်ကြီးက ကျောင်းအပြင်ကိုထွက်လာတယ်။ ဦးဇင်းလက်ထဲက ဓါးကုို တောင်းလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ဆံချပေးတော့တယ်။ အမေတို့ က ကြုံခဲလေခြင်းဆိုပြီး အထူးဝမ်းသာကြတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော် တို့ ကို သိမ်တက်ပေးပါတယ်။
ပြည်တွေပေးရမဲ့ အကြွေး ၂၆.၈၄ ဘီလျံဒေါ်လာ ကျော် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များပိုင် ဦးပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၆၀ ကျော်ရှိနေပါပြီ ။
From ..> Clean Text
Union of Myanmar Economic Holdings Limited operates as an industrial
conglomerate that engages gem production and marketing, garment
factories, wood industries, goods and beverages and other trading
companies, supermarket, banking, hotels, tourism, transportation,
construction and real estate, computers, telecommunications,
electronics and equipment, and steel and cement industries. The
company is based in Yangon, Myanmar.
189-191 Maha Bandoola Road
ရာနှုန်းပြည့် ထောက်ပံ့ထားတဲ့ လုပ်ငန်းများ (၁၆)မျိုး
(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ (၉)မျိုး
၁။ မြန်မာရူဘီအင်တာပရိုက်စ် (Myanmar Ruby Enterprise)
၂။ မြန်မာအင်ပီးရီးရယ်ဂျိတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Imperial Jade Co.,Ltd.)
၃။ မြန်မာရာဘာဝုဒ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Rubber Wood Co., Ltd.)
၆။ မြဝတီသောက်ရေသန့် လုပ်ငန်း (Myawaddy Purified Drinking Water)
၇။ ဆင်မင်း(၁/၂)ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း(ကျောက်ဆည်) (Sinmin Cement Production)
၉။ ရွှေပင်လယ်မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် (Shwe Pin Lel)
(ခ) ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ(၁)မျိုး (Trading)
၁။ မြဝတီထရေးဒင်းလီမိတက် (Myawadding Trading Limited.)
(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (၆)မျိုး (Service)
၁။ မြဝတီဘဏ်လီမိတက် (Myawaddy Bank)
၂။ ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် (Bandoola Transportation Co., Ltd.)
၃။ မြဝတီခရီးသွားလုပ်ငန်း (Myawaddy Travel and Tour)
၄။ နဝဒေးဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလီမိတက် (Nawaddy Hotel & Tourism)
၆။ မြန်မာ့အားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (Myanma Arr Construction)
ဆင့်ပွားထောက်မ ပါဝင်ပူးပေါင်းမှု ပြုသော ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ (၂၁)မျိုး
(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ (၁၄)မျိုး (Production)
၁။ မြန်မာဆေးဂဲလ် အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက် (Myanmar Segye Int. Limited.)
၂။ မြန်မာဒေဝူး အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက် (Myanmar Daewoo Int. Limited.)
၃။ မြန်မာယူနီမစ် အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက် (Myanmar Unimix Int. Limited.)
၄။ ရော့သ်မင်အော့ဖ်ပေါလ်ဖေါလ်မြန်မာ ပရိုက်ဗိတ်လီမိတက် (Paul Maul
Myanmar Private Limited.)
၅။ မြန်မာဘရူဝါရီ လီမိတက် (Myanmar Brewery Limited.)
၆။ မြန်မာပေါ်စကိုစတီးလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Posco Steel Co., Ltd.)
၇။ မြန်မာနိုဗိုစတီးလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Novo Steel Co., Ltd.)
၈။ ဘာဂျာပိန့် မင့်နုဖက်ချားရင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၉။ သည်ဖက်စ်အော်တိုမိုးတစ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (The Fast Automotive Co., Ltd.)
၁ဝ။ အမ်ဂျီယူဘီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (MGUB Co., Ltd.)
၁၁။ မြန်မာနိုဗို ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Novo Co., Ltd.)
၁၂။ ရတနာကုဋေကုဋာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၁၃။ မြန်မာဂျိတ်အင်တာနေရှယ် လီမိတက် (Myanmar Jade Int. Limited.)
၁၄။ မြန်မာဆီးမင့် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Cement Co., Ltd.)
ခ။ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ (၃)မျိုး (Trading)
၁။ မြန်မာ့ရှေ့ ဆောင်ထောက်ပံ့ရေး လီမိတက်
၂။ မြန်မာဖဲယားပရိုက် ပရိုက်ဗိတ်လီမိတက် (Myanmar Fair Price Private Limited.)
၃။ ဘန့်ဟော့ဟင်မြန်မာ လီမိတက်
ဂ။ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (၄)မျိုး (Service)
၁။ စီးမင်း(စ်)လီမိတက်မြန်မာ (Siemens Limited Myanmar)
၂။ မြန်မာလင်း(ဒ်)အင်(န်)ဒဲဗဲလော့မင့် လီမိတက် (Myanmar Land and
၃။ နေရှင်နယ်ဒီဗဲလုပ်မင့် ကော်ပိုရေးရှင်း (National Development Corporation.)
၄။ ဟံသာဝတီဂေါက်ကွင်းနှင့်မြို့ တော်ကလပ်အသင်း လီမိတက် (Hanthawaddy Golf
Club and City Golf Club Limited.)
ရာနှုန်းပြည့် တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံခြားသား၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုသော
(က) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ (၈)မျိုး (Manufacturing)
၁။ မာကျူရီရေးမင်နှူဖက်ချာရင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် (Mercury Ray Manufacturing Co., Ltd.)
၃။ မြန်မာဟွာဖူးအင်တာနေရှင်နယ် လီမိတက်
၄။ မြန်မာထရိုင်းယင့်အင်တာနေရှင်နယ် လီမိတက်
၅။ မြန်မာမာမီးဒါဘယ်ဒက်ကာ လီမိတက်
၆။ မြန်မာဆမ်ဂေါင်းအင်ဒက်စရီရယ် လီမိတက်
၇။ မြန်မာတိုကီဝါ ကော်ပိုရေးရှင်း (Myanmar Tokiwa Corporation.)
၈။ မြန်မာကုရိုဆာဝါထရပ်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Myanmar Kurosawa Trust Co., Ltd.)
(ခ) ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ (၁)မျိုး (Trading)
၁။ ဒိုင်းမွန်းဒရက်ဂွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Diamond Dragon Co. Ltd.)
(ဂ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (၂)မျိုး (Service)
၁။ မိုးကုတ်မိုတယ်လုပ်ငန်း (Mogoke Motel)
၂။ မြန်မာဟိုတယ်နှင့်ခရုဆက်စ် လီမိတက် (Myanmar Hotel & Cruise Limited.)
ထပ်မံ တိုးချဲ့လာသော လုပ်ငန်းများ
၁။ အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်ငန်းကို မလေးရှားမှ Comfort International
Incorporate (CII) နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း
၂။ ငပလီကမ်းခြေနှင့် ကမ်းသာယာကမ်းခြေတို့တွင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား
လုပ်ငန်းများကိုကမ္ဘောဇ၊ ထူးမော်၊ အေးရှားဝေါလ်၊ ဝုဒ်လန်း၊ ယုဇန၊
ထွန်းလင်းရောင်၊ ဆဲဗင်းဖိုးဆဲဗင်းကုမ္ပဏီတို့ နှင့် ပူးပေါင်း
၃။ဆပ်ပြာစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းကို မွန်ပြည်နယ်၊ပေါင်မြို့ နယ်မှာ တည်ဆောက်ခြင်း
၅။ ဂရက်နိုိက်အလှဆင်ကျောက်ပြားစက်ရုံကို ကျိုက်ထိုမြို့ မှာတည်ဆောက်ခြင်း
၆။ သူဌေးကျွန်းဟိုတယ်နဲ့ ကာဆီနိုလုပ်ငန်းကို ထိုင်းမှ
1. မိုးကုတ် ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း
2. မိုင်းရှူး ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း
3. နန်းယားဒေသ ကျောက်မျက် တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း
4. ရွှေသတ္ထု တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
5. မော်ချီးဒေသ ခဲသတ္ထု တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
6. ကျောက်စိမ်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
7. ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
8. ဂရင်းနှိပ် ကျောက်ပြားစက်ရုံ (ကျောက်ဆည်)
9. ပလပ်စတစ် ရက်ထည်အိပ်စက်ရုံ (ကျောက်ဆည်)
10. မြန်မာပေါ်စကို စတီးလ် သွပ်ပြားစက်ရုံ (Myanmar Posco Steel Co., Ltd.)
11. မာမီး ခေါက်ဆွဲစက်ရုံ
12. Red Rubby စီးကရက်စက်ရုံ
13. ဒူးယားစီးကရက်စက်ရုံ (ပခုက္ကူ)
14. မြန်မာဘီယာ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
15. လန်းပီ ပင်လယ်ရေကြောင်းခရီး ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း
16. ငွေပင်လယ် မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း
18. ရေထွက်ပစ္စည်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်း
19. မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ (ကြက်/ငါး/ပုဇွန်)
20. ရေလုပ်ငန်း စက်မှုရုံ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
21. တနင်္သာရီတိုင်း ငှက်သိုက် ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း
22. ဆီအုန်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း (ကော့သောင်း)
23. သကြားစက်ရုံ (ဥက္ကံ)
24. ပဒုမ္မာ ဆပ်ပြာစက်ရုံ (ပေါင်)
25. သကြားစက်ရုံ (အင်းငါးခွ)
26. တော်ဝင် ပလပ်စတစ် လူသုံးကုန်စက်ရုံ (ကျောက်ဆည်)
27. ဆာလဖြူရစ် အက်စစ်စက်ရုံ (မုံရွာ)
28. နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်မှုလုပ်ငန်း
29. တပ်မတော်သား သက်သာချောင်ချိရေး အရောင်းဆိုင်
30. ဒုိ့ယာမြေ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
31. ပြည်သာယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
32. Ruby Mart Supermarket
33. Pyininbin Industrial Park (in North Yangon’s suburbs)
34. Myanmar Five Stars Shipping
35. Gandamar Wholesale
36. Myanandar Purified Drinking Water
37. Myanmar Nobel College (Ahlone, Yangon)
38. လွယ်ဂျယ်။မောတောင် (ကျောက်မီးသွေးမိုင်း)
39. Myin Gyan Steel Mill
40. Ywama Insein Steel Mill
41. Kyauk Swe Gyo(near Aung LAN) Steel Mill
42. Maymyo Iron Mill
43. တာရာစက်ရုံကြီး (အင်းစိန် ရွာမ)
44. တန် ၄၀၀၀ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ (ဘားအံ)
အချက်အလက် အားလုံး မှန်ကန်ကြောင်းကိုတော့ အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။
မှားယွင်းနေတာ ဖြည့်စွက်စရာ ရှိခဲ့ရင် သိသူများက ထပ်မံ ပြင်ဆင်
ဖြည့်စွက်စေလိုပါတယ်။ တစ်ချို့ဟာတွေက ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ နာမည်အောက်က
လုပ်ငန်းခွဲတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို
အောက်ဖော်ပြပါ Reference Links တွေမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်မှာ ရိုဟင်ဂျာဘယ်နစ်ယောက်ရှိသလဲလို့လူမျိုး ရေး အစွန်းရောက် မေသကြန်ဟိန်းက မေးတယ်။
ရှေးမြန်မာ ကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး သူ က ဘယ်လိုစွပ်စွဲဦးမလဲ
ရှေးခေတ် မန္တလေး ငွေလဲ ဈေးကွက်
Money Exchange in Mandaly around 1800
Give Our lands back
Padaung Ladies Bath(2013)-(Credit: Artypixall) Lin San Letpanpya
ကိုမိုးသီးဇွန် ( ၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံကာလ)
ဗကသ အတွင်းရေးမှုအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်။ မဆလပါတီကို ဖျက်သိမ်းဖို့ရာဇသံပေးနေစဉ်က ဖြစ်ပါတယ်။
ဗွီဒီယို ဂိမ်းက သင့်ကလေးကို ဖျက်ဆီးနေသည်။
သင့်ကြောင့် သင့်ကလေး ဗွီဒီယို ဂိန်းမစွဲပါစေနှင့်။
ဗွီဒီယိုဂိန်းများကြောင့် သင့်ကလေး ဖြစ်လာနိင်သည့်ဆိုးကျိုး အလားအလာများကို လူမှုရေးသုတေသီများက
၁။ အဒမ်လန်ဆာ လို လူသတ်သမား လေးဖြစ်လာနိင်တယ်။
၂။ ကျောင်းမှာစာညံလာတယ်။ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများမှာတော်တဲကလေး
များ ကျောင်းစာ တွင်အလွန်ညံလာကြသူများဖြစ်လာတယ်။
၃။ တချိန်လုံး ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားနေတဲ့အတွက်ကျမ္မာရေးထိခိုက်လာတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မျက်မှန်တပ်လာရမယ်။
ဆံရေးမလုပ်တဲအတွက် သင်ယူမှု ( Learning Process) ကင်းမဲ့ပြီး လူရာမ၀င်တဲ့သူ။ အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ ရီးစားမရသူဖြစ်လာမယ်။ အရှုံးသမား ( Loser) လို ခံစားလာတတ်တယ်။ မိဘတွေအပေါ်အဆိုးမြင်ဝါဒီဖြစ်လာမယ်။
၄။ အိမ်မှုကိစ္စများကို တာဝန်( Social Responsible) ကို မယူခြင်တဲ့သူလေး ဖြစ်လာတယ်။ တကိုယ်ကောင်းသမားလေး
၅။ ကလေးတွေကို ကွန်ပြူတာဂိန်းမှာဝေးဝေးထားပါ။ ကလေးခြင်းဆော့ခိုင်းပါ။ စာဖတ်ခိုင်းပါ။ မိသားစုအလုပ်တွေကို
ကူညီခိုင်း ပါ လို့ အမေရိကန် ကလေးသူငယ်များ ဖွင့်ဖြိုးရေး ပညာရေး သုတေသီတွေက အကြံပြုထားကြပါတယ်။
ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုစွဲနေကြတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ ကလေးငြိမ်ရင်
ပြီးရော ဆိုပြီး မိဘတွေကလည်း ကျေနပ်နေတာကိုတွေ့ ရတယ်။
ဗွီဒီယုိုဂိမ်းထဲမှာ ကလေးတွေကို ပညာပေးတဲ့ဂိန်တွေလဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အလွန်နည်းတယ်။
မိဘများအနေနဲ့ဂိမ်းအမျိုးစားများကို ရွေးခြယ်ကန့် သတ်ပါ။
တနေ့ ကို တနာရီထက်ပို မကစားသင့်ကြောင့် သုတေသီများ
လယ်သမားတွေက မြေသိမ်းတယ်ဆိုရင် လယ်သမားတွေအတွက် ဘ၀အာမခံချက်ရှိတဲ့ စီပွားရေးလုပ်ငန်း၊ နေစရာ အိမ်မြေခြံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျောင်း၊အားကစားကွင်း ဆေးရုံ ၊ စာကြည့်တိုက်စတဲ့ လူမှုရေးတာဝန်ယူမှု ( Social Responsible ) ကို သိမ်းပိုက်တဲ့ အစိုးရ သို့ မဟုတ် ကုမဏီတွေက ပြန်ပြီး တာဝန်ယူပေးကြရပါတယ်။ ဒီလိုတာဝန်ယူမှု မရှိရင် ပြင်းထန် တဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိင်ပါတယ်။
လယ်သမား သူပုန်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆရာစံ
လွတ်လပ်ရေး သူရဲကောင်း အာဇာနည် ကြီး များ
General Aung San on different Religions
'' မ အ အောင်သမိုင်းကိုလေ့လာကြ။ '' ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်း ( သမိုင်းပညာရှင်)
Dr. Than Tun (Burmese: သနျးထှနျး, pronounced [θáɴ tʰʊ́ɴ];6April 1923 – 30 November 2005) was an influential Burmese historian as well as an outspoken critic of the military junta of Burma. For his lifelong contributions to the development of worldwide study of Burmese history and culture, Professor Than Tun was awarded the Fukuoka Asian Culture Prize in 2000.
Ko Ye Lwin
Soul of Our Generation
ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ စာအုပ်
နာခံမှုကိုစမ်းစစ်ခြင်း ( ဒီမှာ ကလစ်လုပ်ပြီးဒေါင်းလုပ်ပါ။)
မြန်မာနိင်ငံမှာ အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည် ရတဲ့အကြောင်းက အာဏာရှင်စနစ်ယဉ်ကျေးမှု ရှိနေလို့ ။ ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုသွပ်သွင်းထားတဲ့ စဏကျရဲ့ လောက နီိတိဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ကိုမိုးသီး က ရဲရဲရင့်ရင့်ဝေဖန် ထားတယ်။ လောကနီိတိကို သူလိုစနစ်တကျပိုင်းခြားဝေဖန်မှု သမိုင်းမှာမရှိသေးဘူး။ ဒီမှာကလစ် ။ ဒါကိုဖတ်။ စာအုပ်အနေနဲ့ ဖတ်ခြင်သူတွေအတွက် ၁၀ ဒေါ်လာ နဲ့ ဝယ်ယူအားပေးနိင်တယ်။ WHY THE MILITARY DICTATORSHIP RULE STILL EXISTS IN BURMA? The simple answer to the question points to LAW-KA-NI-TI, highlighting authoritarian culture asasocial norm,abinding principle andamethod manifesting stronger rule over weaker society. LAW-KA-NI-TI also known as SA-NA-KYA-NI-TI that originated from India was coined by SANAKYA founding father of ASIAN REALISM SCHOOL. Moethee Zun has given his critique/view on the concept of LAW-KA-NI-TI in his own perspective and space unlike nor equalled by none in HISTORY. Click here to view. Or it is only US$ 10.00 per printed copy.
အနီရောင်က ရဲရင့်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်ခြင်း၊ အ၀ါရောင်က ချမ်းသာခြင်း၊ ခွပ်ဒေါင်း က အမျိုးသားရေးကိုယ်စားပြုတယ်။ စက်ဝန်းက သူရိန် နေမင်းကြီးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ မြန်မာ တွေက လမှာယုန် ၀ပ်တယ်။ နေမှာ ခွပ်ဒေါင်း လို့ အယူရှိတယ်။ ရောင်ခြည်တထောင်ဆောင်တဲ့ နေမင်းကြီးက ခွပ်ဒေါင်းဟာ ဖိနိပ်မှု ၊မတရားမှုတွေကို တွန်လှန်ရန် ခုန်တွက်လာပုံကိုဖေါ်ကြူးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို လွတ်လပ်ရေးကြိုးပန်းပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်ကြီးတွေက အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလံ ကို ၅ ပေ ၃ ပေခွဲ လုပ်ရမယ်။ ခွပ်ဒေါင်းပုံကို မျိုးစုံရေးစွဲနိင်တယ်။ မြင်တာနဲ့ခွပ်ဒေါင်းမှန်းသိရင် ရတယ်။ ကလေးတယောက်တောင်ဆွဲနိင် လွယ်ကူတဲ့ ဒီဇိုင်းကိုလည်း လုပ်နိင်ပါတယ်။
၁၉၉၁၊ ဗဟိုကော်မတီအစည်းဝေး။ ( လောကွားလူ စခန်း )
ခွပ်ဒေါင်းအောင်လံတော်ရှေ့ မှ ဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ
ကိုမိုးသီးနှင့် တူးတူး Ko Moethee and Desmond tutu nobel peace prize winner
Human Rights for All
Ko Moethee and U Aung Khin
1990, Interveiw withaJournalist
သူဟာ မြန်မာ တပ်မတော် က လေးစားဖို့ အကောင်းဆုံး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦး ။ သူကိုမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။
Moethee Zun in 8888
Moethee in 1988 at Rangoon University
Saturday,3March 2012
တောင်အာဖရိက အပြောင်းလဲက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ တွေ့ ဆုံဆွေးတဲ့နည်းနဲ့ပြသနာကို ချုပ်ငြိမ်းစေခဲ့တယ်လို့ နားလည်ထားကြတယ်။ တောင်အာဖရိက တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုကို ကျနော်တို့ မကြာခန ကိုးကားကြတယ်။ တောင်အာဖရိကမှာလူမဲ (အများစု) က ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အာဏာရလာကြပါပြီ။ ပြသနာတွေက ပြီးပြီလား။ နှစ်ပေါင်း ၂၀သက်တန်းရှိခဲ့သောငြားလဲ ပြသနာတွေ မပြီးသေးဘူးလို့ဆိုတယ်။ ဒီအကြောင်းကို စာရေးသူ Fiona Fordeသူရဲ့An Inconvenient Youth: Julius Malema and the ‘New’ ANC မှာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတယ်။ အာဏာကတော့လူအများစုဖြစ်တဲ့ လူမဲတွေလက်ထဲမှာ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ ကတော့ လူဖြူ ( လူနည်းစု) လက်ထဲမှာ လို့ ထောက်ပြထားပါတယ်။ ၀င်ငွေမညီမျှမှုနဲ့ငွေ ကြေးလည်ပတ်မှု မှာ လူဖြူတွေကဆက်လက်ထိမ်းချုပ်ထားနိင်ခဲ့တယ် ။ ဒီအခြေခံပေါ်မှာ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုဇတ်လမ်း ဟာ မပြီးပြတ်နိင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးထားတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ တောင်အာဖရိက နိင်ငံရေးမှာ တရိပ်ရိပ်တက်လာတဲ့ ဂျူးလီးယက် မာလီမာ ရဲ့ဘ၀ကိုနောက်ခံထားပြီးတင်ပြလာတာဖြစ်တယ်။ မာလီမာက လူငယ်ခေါင်းဆောင်။ သူအကြောင်းကို ပြင်ပကမာ က မသိကြပေမဲ့သူဟာ အသားရောင်တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ
တလျောက်လုံးပါဝင်ခဲ့သူ။ သူကို မိခင်အေအင်စီအဖွဲ့ ကြီးကလည်း တာဝန်က ရပ်ဆိုင်း ထားတာခံရဘူးတယ်။ အပြစ်ပေးတာကိုခံရဘူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစီးပွားရေးမညီမျှမှု က အာဖရိကို ဆင်းရဲတွင်းနက်စေနေတဲ့ အဖြစ်ကို သူက အပြောဆုံး။ ဒီလိုပြောတဲ့အတွက် လူထုထောက်ခံမှုတဟုန်တိုးရလာတယ်။ အေအင်စီကလည်း တိုက်ပွဲကာလကလို မဟုတ်တော့ပဲအာဏာရလာတဲ့အခါမှာ လျော့တိလျောလျဲ ဖြစ်လာတယ်။ လူဆင်းရဲသားတွေဘ၀ ကို မေ့ လျောေ လျာ့ရှိလာတယ်။ ဒီအခြေနေမှာ ဂျူးလီယပ် မာလီမာ
ဟာ တောင်အာဖရိကမှာရော ၊ နိင်ငံတကာမီဒီယာမှာပါသတိပြုစရာလူဖြစ်လတယ်။
စာရေးသူ ဖီယိုးယား ဖေ့ါဘ် ကတော့ မာလီမာ ဟာ မညီမမျှဖြစ်နေတဲ့ အာဖရိကဘ၀ တွေထက် အာဏာကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားသူလို့ ကောက်ချက်ချတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် မာလီမာရဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ အာဖရိကတိုက်က မညီမမျှဖြစ်နေတဲ့ ဆင်းရဲချမ်းသာကွဟမှုတွေအကြောင်းကို ကျနော်တုို့ ဆက်လက်လေ့လာကြတာပေါ့။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် မှာ ပြောကြာခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ရဲ့ သမိုင်းဝင်မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ
Challenges on Small and Medium Enterprises in Burma
ဖလူးတိုက်ပွဲ မှတ်တမ်း DVD ထွက်ပြီ
Must Read: A book about Burmese Political Parties by Win Tint Htun
Contact Email.. yamounnar@gmail.com, bhamonaing@gmail.com
မတရားတာ တွေ့ရင် ဒါမတရားဘူးလို့ပြောပါ
တခါကဂန္ဓီဟာ ခရီး တခုကို ရထားစီး သွားဖို့ ရထားဘူတာကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူရောက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲ ရထားက စတင်ပြီး ထွက်ခွါဖို့ ဘီးစလှိမ့်နေပြီ။ ဒီတော့ ဂန္ဓီကြီးလည်း ရထားပေါ် ကမန်းကတန်းတက်လိုက်ရတယ်။ ရထားခြေနင်းခုံနဲ့ သူ့ရဲ့ခြေထောက်တဘက်တိုက်မိပြီး သူ့ရဲ့ဖိနပ်တဖက် ဟာ ရထားအောက်သံလမ်းပေါ်သို့ ကျသွားခဲ့တယ်။ဒီတော့ ကျန်နေတဲ့ ဖိနပ်တဖက်နဲ့ ဂန္ဓီ ရထားပေါ်ကို သေချာရောက်သွားတယ် ဆိုရင်ပဲ ဂန္ဓီက ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဖိနပ်တဖက်ကို ကမန်းကတန်းချွတ်လိုက်ပြီး စောစောကကျသွားတဲ့ ဖိနပ်ရှိမှန်းသိပြီး ကျန်နေတဲ့ ဖိနပ်ကိုပစ် ချလိုက်ပါတယ်။ သူ ဒီလိုလုပ်တာကို ဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ လူတယောက်တွေ့တော့ “ဘာလုပ်တာလဲဗျ…။ ဘာဖြစ်လို့ ကျန်နေ တဲ့ ဖိနပ်တဖက်ကို လွှင့်ပစ်လိုက်ရတာလဲ။” လို့မေးတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဂန္ဓီကြီးက အခုလိုပြန်ဖြေခဲ့သတဲ့။ “ကျနော့်ဆီမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ဖိနပ်က ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ ဘူးလေ။ ဒီတော့ ခုနကျသွားတဲ့ ဖိနပ်နေရာနားရောက်အောင် ကျန်နေတဲ့ ဖိနပ်တစ်ဖက်ကို ပစ်ထားခဲ့လိုက် တော့ တွေ့တဲ့သူက ဖိနပ်တရံ ဆိုရင် စီးလို့ရတာပေါ့ဗျာ။” “တဖက်တည်းဆိုရင် ကျနော့်အတွက်လည်း တယ်… အသုံးမ၀င်လှဘူး။ အခြားသူလည်း အသုံးမ၀င်ဘူး လေ။ အခုလို တရံလုံးရတော့ သူ စီးလို့ရသွားတာပေါ့။” လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ( မောက္ခ မဂ္ဂဇင်း )
General Aung San's Press Conference
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရှား ပါးဓါတ်ပုံ ။ ဗိုလ်ချုပ်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်နေပုံရတယ်။
General Aung San during independence Movement
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရှားပါးဓါတ်ပုံ ။ သူလည်းတခါတလေတော့ ဖွာ ပုံရတယ်။
High School Students were very brave in 1988
၈ လေးလုံး တုန်းက အထက်တန်းကျောင်းသားတွေက ဒီလို ရဲရင့် ခဲ့တယ်။
ကြားဖြတ်အစိုး ရ ဖွဲ့ ဖို့့ ဆေး တက္ကသိုလ် ၁ အစည်း ဝေး
ဒီအစည်းဝေး မှာ ကျောင်းသား ၁၄၁ ဦး တက်တယ်။ ခေါင်းဆောင် ၅ ဦးတက်တယ်။ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့ ဖို့ လုပ်တယ်။ လူ ၃သောင်းလောက်က ကျောင်းအပြင်မှာ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးထားတယ်။ ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ ပေးဖို့အဆိုကို ကျောင်းသားထု ကိုယ်စား ကျနော် ( မိုးသီး ) ကတင်ပြခဲ့တယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေ ကြားမှာ သဘောတူညီမှု မရ ခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရမဖွဲ့ လိုက်နိင်ဘူး။ အစည်းဝေးမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ဦးနု၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးအောင်ကြီး၊ ဦးတင်ဦး၊ ဗိုလ်ရန်နိင်၊ ဦးဝမ်းကိုဟော တို့ ပါဝင်တယ်။ ကြားဖြတ်အစိုးရ မဖွဲ့ လိုက်နိင်တာ ကျနော်တို့ အတွက် မဟာ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျမှု ဖြစ်လာတော့တာပဲ။
WFWW Strategic Team
ဦးအောင်ချမ်း Inside Burma
(Blog Contacts: ဆက်သွယ်ရန်)
We fight We Win- Reinventing Revolution
စစ်အစိုးရ က အုပ်ချုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းရေး
လောင်စာအပြည့် အလုံအလောက်ဖြန့် ဖြူးပေး
ရေအားလျှပ်စစ် ကို ပြည်တွင်းမှာသာဖြန့် ဖြူပေး
ထူးသစ်ကုမဏီက သစ်တောတွေကိုခုတ်နေတာကို ချက်ခြင်းရပ်
ပါမစ် စီးပွားရေးအလိုမရှိ ။
အသက် ၆၀ ကျော် သူတိုင်း တပ်မတော်ဦးစီးချုပ်က အနားယူ
ပြည်သူလူထု နဲ့ တပ်မတော်သားတွေကို မြက်ခုတ်၊ ခြုံရှင်းမြောင်းတူး မခိုင်းရ
ပြည်သူလူထုနဲ့တပ်မတော်သား မိသားစုတွေကိုလေးလေးစားစား ဆက်ဆံ
တပ်မတော်ကိုခုတုံးလုပ် စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ သူတို့ အမျိုးတွေကို တပ်မတော်ကထုတ်ပယ်။
စက်မှု လုပ်ငန်းတွေ အတွက်လျှပ်စစ်မီးအလုံအလောက် ဖြန့် ပေး
စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းတွေကို ငွေကြေးထောက်ပံပေး
မြန်မာအမျိုးသား စက် မှု လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကိုအားပေး
လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ကိုနိင်ငံခြားမှ ၀ယ်ယူခွင့်ပေး
လုပ်ခလစာ မိသားစု လုံလောက်အောင်တိုးမြှင့်ရရှိရေး
အလုပ်သမားများလုံလောက် ပြည့်ဝသော ပင်စင်ခံစားပိုင်ခွင့်ရရှိရေး
လယ်ယာမြေ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုပေး
လွတ်လပ်စွာ စိုက်ပျိုး၊ရောင်းချ၊ သယ်ယူခွင့်ပေး
ကျောင်းသားတိုင်း ကို ပညာသင်စာရိတ်ပေး
မိခင်နဲ့ ကလေးငယ်များ အဟာရပြည်ဝစွာစားသောက်နိင်ရေး
မိခင်နဲ့ ကလေးငယ်များ ကျမ္မာရေး အပြည့်အ၀ ခံစားခွင့်ကိုပေး
မိခင်နဲ့ ကလေးသူငယ်များကို အကြမ်းဖက်မှု မှ ကာကွယ်ပေး
သက်ကြီးရွယ်အိုများကို လူမှုဖူလုံရေးလုံလောက်အောင် ပေး
သက်ကြီးရွယ်အိုများကို နေထိုင်စရာ တည်ဆောက်ပေး
သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှု ကိုပေး
Saffron Movement in 2007
When We were in 88.
MKN and MTZ
Founding Father of Independence
မကြောက် ကြ နဲ့
Daw Aung San Suu Kyi and Ko Moethee
ဒေါ်စုနဲ့ ကိုမိုးသီး ၈ လေးလုံးကာလ လူထု တရားပွဲ တခု မှာ ကိုမိုးသီး တရားဟော နေစဉ်
Boycott these businesses.
1. Air Bagan ( Htoo Trading)
2. Rich Gems
3. Sun Tac
4. Sunday Mart
5. Happy Noodle
6. MMS Company
7. Ye Ta Gun Construction
8. Rose Hill Hospital
9. J & J donut
10.Heritage Golf Club
11. Pacific High Tech
12. Taw Win Electric
13. Phyu Diamond shop
14. Diamond Palace Company
15. Asia World Group
16. Eden Group (Marina Residence)
17. Kan Baw Za Bank
18. Myan New Technology
19. Yuzana Company Ltd. ( Also owns Shwe Nagar Min Ltd.)
20. Ruby, Dragon Jade and Gems Co. Ltd